Nigeria oo xirtay dad looga shakiyay Daacish - BBC News Somali
Nigeria oo xirtay dad looga shakiyay Daacish
Image caption Nigeria ayaa dagaal kula jirta kooxda Boko Xaraam.
Booliska khaaska ah ee dalka Nigeria ayaa sheegaya in ay xireen ugu yaraan 18 qof oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen in ay ku biiraan kooxda la baxday Khilaafada Islaamka amaba ay weerarro ka gaystaan woqooyiga dalkaasi Nigeria.
Ciidamadani ayaa sheegaya in ay si weyn ula socdaan lix qof oo kale oo ay isha ku hayaan.
Waaxda amniga qaranka ee dalkaasi ayaa waxa ay ku sheegtay warbixin qoraal ah oo ay soo saartay in dadka la soo qab-qabtay uu ka mid yahay nin kooxdaasi khilaafada Islaamka u qorayay dagaalyahanada iyo saddex qof oo kale oo uu kooxda ku biiriyay, kuwaasi oo ay ku jiraan haweeney iyo arday.
Dadkani ayaa qorshaynayay in ay u safraan xero tababar oo ku taala dalka Liibiya.
Shan qof oo kale oo la tuhunsan yahay ayaa sidoo kale la soo xiray iyaga oo isku dayaya in ay dalka Libya ula haajiraan qoysaskooda sida carruurtooda da’da yar.
Warbixintani ayaa sidoo kale lagu sheegay in la soo xiray dad lagu tuhunsan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxo caalami ah oo jihaad doon ah oo maleegayay weerarro ka dhan ah goobaha cibaadada iyo xarumaha nasiinada.
Sida laga soo xigtay waaxda ammniga qaranka ee dalkaasi Nigeria, shakhsiyaadkani ayaa waxa ay doonayeen in tababaro iyo kaalmo ay ku helaan dhanka intarneedka, waxaana lagu soo qab-qabtay hawlgallo dhowr ah oo la sameeyay bishii janaayo ee aan soo dhaafnay.
Muddo sanad ah ayaa haatan laga joogaa markii hoggaamiyaha kooxda Boko Xaraam uu shaaciyay in uu beyca la galayo ama ku biirayo kooxda khilaafada islaamka balse tan iyo xilligaasi lama hayo caddeymo muujinaya xiriir toos ah uu dhaxeeya labadani kooxood.